Zithini ii-monomials kwaye zenzelwe ntoni? Funda ngoku Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kuthunyelwe ngu UDebora Silva
Ixesha lokuma, okanye i-algebraic, naliphi na ibinzana le-algebra elinokuphindaphindwa kuphela phakathi kwamanani kunye nokungaziwa (oonobumba abamele amanani angaziwayo). Yeyona ndlela ilula yokubonisa i-algebra kwaye inokuqondwa njenge-polynomial enekota enye.
Ukusetyenziswa kweekhonsepthi kumanqwanqwa okuqala ukusuka ekwenziweni kwezinto (njengebhola, umzekelo) ukuya kubalo oluntsonkothileyo.
Igqwetha elinguFrançois Viète lalinoxanduva lokusebenzisa oonobumba kubudlelwane bemathematika, obuvumela ukubala kwe-algebra kunye nophuhliso lwemathematika kunye nesayensi.
1 Athini amalungu omtshato omkhulu?
2 Iimpawu ezifanayo
3 Ukongezwa kweAlgebra kunye nokukhupha ii-monomials
4 Phinda-phinda uze wahlule ii-monomials
Athini amalungu omtshato omkhulu?
Ukuqonda i-monomials, kufuneka sazi iinxalenye zazo. Zahlulwe zangamacandelo amabini: inani, elibizwa ngokuba ngumlingani womlinganiso womntu omnye; kunye nemveliso eguquguqukayo okanye imveliso (iileta).
Nika ingqalelo kule mizekelo ilandelayo:
4y: kule monomial, sinokubona ukungalingani (4) kunye nenxalenye yokoqobo (y).
X - Qaphela ukuba, kule monomial, akukho manani acacileyo. Kule meko, ukungalingani kuya kuhlala kungu-1. Inxalenye yokoqobo yileta x.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kusekho iimeko apho indawo yokoqobo ilahlekileyo, kwaye kuphela ukungqinelana kwamanani okuvela. Kuyinto enkulu ngaphandle kwenxalenye yokoqobo. Ukuba kuphela sinenombolo engu-zero, ngaphandle kwenxalenye yokoqobo, ililize kuphela.
Njengoko sele sibonile, monomial nganye yahlulwe yangamacandelo amabini: indawo yokoqobo kunye nokulingana. Ukuba ezimbini okanye ngaphezulu ii-monomials zinenxalenye efanayo yokoqobo, zi-monomials okanye amagama afanayo.
-5yz kunye ne-½ yz zii-monomials ezifanayo, kuba zinenxalenye efanayo yokoqobo (yz).
-x kunye ne-2x zikwimo efanayo yemonomials, kuba icandelo lokoqobo lilingana (x).
Ukongezwa kweAlgebra kunye nokukhupha ii-monomials
IiMonomials zinokongezwa kuphela okanye zithatyathwe xa iinxalenye zazo zifana. Ukwenza lo msebenzi, yongeza nje ii-coefficients kwaye uphinde icandelo lokoqobo.
Jonga ngononophelo kulo mzekelo ulandelayo:
Ukuthabatha kwenziwa ngendlela efanayo:
-25xy - 3xy - 5xy = 17xy.
Phinda-phinda uze wahlule ii-monomials
Ukwenza ukuphindaphinda kunye nokwahlulahlula ii-monomials, akufuneki zifane. Ngokungafaniyo nokudibanisa nokuthabatha, le misebenzi kufuneka yenziwe kunye nenxalenye yokoqobo kunye nokulingana. Kuya kufuneka sisebenzise ii-coefficients komnye komnye kwaye indawo yokoqobo yelinye yecandelo lokwenyani lenye. Khumbula ukuba ii-exponents kufuneka zongezwe.
Jonga le mizekelo ilandelayo:
-6x²y.2x³.3y Kule, siphinda-phinda 6.2.3 = 36 kwaye siphinda-phinda x².x³.yy = x5.y²
Ngokwahlulayo, kufuneka sahlule ii-coefficients phakathi kwabo, ngendlela efanayo nenxalenye yokoqobo:
-12x4y / 3x2y -> 12/3 = 4; icandelo lokoqobo: x4 / x² = x² kunye y / y = 1, ukunika isiphumo esilingana no-4x².